ငလျင်၊ GNU / Linux တွင် QuakeSpasm နှင့် FPS Quake1 ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ။ အ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 23/08/2021 06:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 23/08/2021 21:29 | အားကစားပြိုင်ပွဲ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ယနေ့၊ အစမှအစတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်ပယ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် GNU / Linux ရှိဂိမ်းများ ထပ်ပြီး ထို့ထက် ပို၍ ငါတို့သည်အများအားဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသည့်ယခင်အတိတ်ကကစားနည်းများဖြစ်သည် "ကျောင်းဟောင်း"မရ။ အထူးသဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၏ခေါင်းစဉ်အတိုင်းယနေ့ FPS Game ၏ပထမဗားရှင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာပါမည် ငလျင် သို့မဟုတ်ပဲ ငလျင် ၁.
«Quake 1» ၎င်းကိုမသိသူများသို့မဟုတ်မှတ်မိသူများအတွက်၎င်းသည် Saga ၏ပထမဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည် ငလျင် Id Software ကုမ္ပဏီမှ ၎င်းကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် 1996 တစ်နှစ် ကွန်ပျူတာများအတွက် ၎င်းသည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည် «Quake 1» ၎င်း၏အစွမ်းထက်အင်ဂျင်ကြောင့် FPS ဂိမ်းအမျိုးအစားကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့သည် ငလျင်အင်ဂျင်.
Quake3 - ဒီ FPS ဂိမ်းကိုဘယ်လို GNU / Linux မှာတပ်ဆင်ပြီးသုံးရမလဲ။
FPS ဂိမ်းဟောင်းကို install မလုပ်ခင်ထုံးစံအတိုင်း «Quake 1»ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသော၊ ရှည်လျား။ ကြီးထွားမှု၊ ဂိမ်းစာရင်း del အမျိုးအစား FPS (လူကိုယ်တိုင်သေနတ်သမား) ကစားရန်ရရှိနိုင် GNU / Linux များ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များမှလင့်များမှ:
လှုပ်ရှားမှုငလျင် 2: «https://q2online.net/action»
ချောကလက် Doom (ဂြိုဟ်ဆိုး၊ အယူမှား၊ Hexen နှင့်အခြားအရာများ): «https://www.chocolate-doom.org/»
Doomsday Engine (ဂြိုဟ်ဆိုး၊ အယူမှား၊ Hexen နှင့်အခြားအရာများ): «https://dengine.net/»
ရန်သူ Terအမွေ - အမွေ: «https://www.etlegacy.com/»
ရန်သူနယ်မြေ - ငလျင်စစ်ပွဲများ: «https://www.splashdamage.com/games/enemy-territory-quake-wars/»
GZDoom (ဂြိုဟ်ဆိုး၊ အယူမှား၊ Hexen နှင့်အခြားအရာများ): «https://zdoom.org/»
Nexuiz ဂန္ထဝင်: «http://www.alientrap.com/games/nexuiz/»
ငလျင် 1: «https://packages.debian.org/buster/quake»
တုံ့ပြန်မှုငလျင် ၃: «https://www.rq3.com/»
စုစုပေါင်း Chaos (Modd Doom II): «https://wadaholic.wordpress.com/»
Wolfenstein - ရန်သူနယ်မြေ: «https://www.splashdamage.com/games/wolfenstein-enemy-territory/»
Heretic and Hexen: GNU / Linux ပေါ်ရှိ "Old School" ဂိမ်းများကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း။
Doom: DoZ နှင့် GZDoom သုံး၍ အခြားသောအလားတူ FPS ဂိမ်းများကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း။
EDuke32: GNU / Linux မှာ Duke Nukem 3D ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ပြီးကစားနည်း။
1 ငလျင်-ပြန်ကစားရန်ထိုက်တန်သောကျောင်းဟောင်း FPS ဂိမ်း
1.1 ငလျင် ၁ အကြောင်း
1.2 GNU / Linux တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းကစားရမည်နည်း။
1.2.1 အဆင့် ၁: ငလျင်အထုပ်ကို install လုပ်ပါ
1.2.2 အဆင့် ၂: ငလျင်အထုပ်ကိုစီစဉ်ပါ
1.2.3 အဆင့် ၃: ငလျင် ၁ ကိုအခြေခံပုံစံဖြင့်ကစားပါ
1.2.4 အဆင့် ၄: ငလျင် ၁ ကိုချဲ့ပုံစံဖြင့်ကစားပါ
1.2.6 ငလျင်ထုပ်၊ QuakeSpasm အက်ပ်နှင့်ငလျင်ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ငလျင်-ပြန်ကစားရန်ထိုက်တန်သောကျောင်းဟောင်း FPS ဂိမ်း
ငလျင် ၁ အကြောင်း
ဒါကြောင့်ဆက်မနေဖို့ «Quake 1» ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ကိုယ်စားအဲဒီအကြောင်းအောက်ပါကိုးကားချက်ကိုငါတို့ချန်ထားခဲ့မယ် Steam ရှိတရားဝင်ကဏ္ section ဘယ်မှာကစားလို့ရသေးလဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့သူ့လက်အောက်မှာကစားတာဘဲ remastered ဗားရှင်း မကြာသေးမီကထွက်လာသော
"Quake သည်ယနေ့ခေတ် retro ပုံစံသေနတ်သမားများအားလှုံ့ဆော်ပေးသောဆန်းသစ်သောအမှောင်စိတ်ကူးယဉ်ပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်သမားဖြစ်သည်။ ငလျင်လှုပ်လျှင်၊ သင်သည်အင်အားကောင်းသောလက်နက်တိုက်ပါ ၀ င်သော Ranger တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောသူရဲကောင်းများ၊ misshapen ဘီလူးများနှင့်ပိုးမွှားကျရောက်စစ်အခြေစိုက်စခန်းများ၊ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်များ၊ ချော်ရည်များပြည့်နေသောထောင်နှင့် Gothic ဘုရားကျောင်းများကိုသင်ရင်ဆိုင်ရမည်။ ဤနေရာများတွင်မှော်အပြေးလေးခုကိုတွေ့ရမည်။ သင်ဤလေးချက်စလုံးအောင်မြင်ပြီးမှသာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အားလုံးကိုခြိမ်းခြောက်သောရှေးဟောင်းမကောင်းမှုကိုနှိမ်နင်းရန်သင့်တွင်အာဏာရှိလိမ့်မည်။" Steam တွင် QUAKE လုပ်ပါ
GNU / Linux တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းကစားရမည်နည်း။
အကြောင်းမူကား၊ ၎င်းပေါ် မူတည်၍ GNU / Linux Distro အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် command command များသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ငါတို့ရဲ့လက်တွေ့ကိစ္စအတွက်ငါတို့ကပုံမှန်အတိုင်းသုံးနေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ထိုက်တန်ပါတယ် Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10)မရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ပါအတိုင်းတည်ဆောက်ထားသည် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
အဆင့် ၁: ငလျင်အထုပ်ကို install လုပ်ပါ
ထည့်သွင်းရန် "ငလျင်" အထုပ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
အဆင့် ၂: ငလျင်အထုပ်ကိုစီစဉ်ပါ
ပြင်ဆင်ရန် "ငလျင်" အထုပ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
မှတ်ချက်: ငါဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲကိုရွေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းလိုအပ်တဲ့ဖိုင်ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာအခြားတစ်ခုခုကိုရွေးနိုင်တယ် «quake106.zip»မရ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် program က download လုပ်လိမ့်မယ်။
အဆင့် ၃: ငလျင် ၁ ကိုအခြေခံပုံစံဖြင့်ကစားပါ
ကစားရန် «Quake 1» နာမည်အောက်က applications menu ထဲမှာငါတို့အတူတူရှာရမယ် ငလျင်မရ။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းကို access ပြုလုပ်သည်ဟုခေါ်သည် "ငလျင် ၁: Pandemonium ၏နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆုံးမစ်ရှင်" လိုအပ်သောဖိုင်မရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဆောင်ရွက်နေစဉ်၊ လုပ်နေစဉ် ငလျင် ဂိမ်းသည်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောသရုပ်ပြဗားရှင်းတစ်ခုကစားနေသည်ဟူသောသတင်းများကိုပြလိမ့်မည်။
အဆင့် ၄: ငလျင် ၁ ကိုချဲ့ပုံစံဖြင့်ကစားပါ
ကစားရန် «Quake 1» y "ငလျင် ၁: Pandemonium ၏နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆုံးမစ်ရှင်" ငါတို့သည်အောက်ပါဖိုင်ကို download လုပ်ရန်သာရှိသည် «ငလျင်_1.rar» ၎င်းကိုဇစ်ဖြည်ပါ။ ဒါဆိုရင်ငါတို့ခေါ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုရှာ၊ နာမည်ပြောင်း၊ ကော်ပီကူးပြီး paste / အစားထိုးလိုက်ရုံဘဲ "PAK.0.PAK" y "PAK1.PAK" အားဖြင့် "Pak0.pak" y "Pak1.pak" လမ်းကြောင်းထဲမှာ «/usr/share/games/quake/id1/».
ဤအရာသည်ပြီးသည်နှင့် ၀ င်ခွင့်များပွင့်လာလိမ့်မည် «Quake 1» y "ငလျင် ၁: Pandemonium ၏နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆုံးမစ်ရှင်" အခက်အခဲမရှိ၊ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောသရုပ်ပြဗားရှင်းမက်ဆေ့ခ်ျများမရှိ၊ နောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောအခက်အခဲအဆင့်နှင့်
ငလျင်ထုပ်၊ QuakeSpasm အက်ပ်နှင့်ငလျင်ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Debian အထုပ်: ငလျင်
Sourceforge: QuakeSpasm အက်ပ်
Gamers: Game Quake
သတိရှိချင်လျှင် Quake1 အကြောင်းလက်ရှိသတင်းအချက်အလက် အောက်ပါ link များကိုလေ့လာပါ။
Bethesda ရှိ Quake1 အပိုင်း
Bethesda ရှိ Quake1 သတင်းအချက်အလက်အသစ်
မကြာခဏလှုပ်ခတ်သောမေးခွန်းများနှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Quake1 အတွက်မှတ်စုများ
အချုပ်အားဖြင့်သင်မြင်သည့်အတိုင်းယနေ့ခေတ်တွင်များစွာသောအချက်ကိုမြင်နိုင်သောကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ လွမ်းဆွတ်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာ« Old School »အမျိုးအစားဂိမ်းများကဲ့သို့ ငလျင် ၁အခြားအလားတူများစွာတို့တွင်လက်ရှိရရှိနေပြီးအလွယ်တကူကစားနိုင်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များကဲ့သို့ GNU / Linux များ။ အပြင်ယခု «Quake 1» ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည် «Linux အတွက်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဇာတိ FPS ဂိမ်းများစာရင်း».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ငလျင်၊ GNU / Linux တွင် QuakeSpasm နှင့် FPS Quake1 ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ။
ROS: စက်ရုပ်များအတွက် Operating System - open source framework တစ်ခုဖြစ်သည်